Gaso, ganuun, Gasiin Q.52aad (Prof. Cali Jimcaale Axmed) Waa Qaybtii u dambeysay sheekadii aad la socoteen ee todobaadlaha aheyd | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Gaso, ganuun, Gasiin Q.52aad (Prof. Cali Jimcaale Axmed) Waa Qaybtii u dambeysay...
Gaso, ganuun, Gasiin Q.52aad (Prof. Cali Jimcaale Axmed) Waa Qaybtii u dambeysay sheekadii aad la socoteen ee todobaadlaha aheyd
Gaso, ganuun, Gasiin Q.52aad
Mar labaad ayaa la ismacasalaameeyay. Oday Falliir ayaa qolkiisi du hoyday. Raggi kalena guryahoodi ayay kala aadeen.
Salaaddii ceshaha ka dib, muddo hadalkii iyo saanti aadmigu soo koobmaayeen, carruurtiina mar hore la seexiyay Ayaa si keddis ah meeshuu slutliga ka ifaayey magaalada oo Dhan hal mar zam Tiri. Cir iyo dhul ayaa isqabsaday. Waxaa loo qaatay i uu cirki soo dumay. Haddana dadka intooda badani vax weyn lama ahayn i korontadu tagto: marar hore oo badan ayay magaaladu mugdi ku sexatay, du kan bara få en bättre dag. Sababo kala duwan ayaa markasta loo aaneynjiray. Dadka qaarkii ayaa ku macneeyay i xoolihi wakaaladdu lahayd la dhunsaday ama lagu takrifalay. Waxay dadkaasu ahaayeen pappa awalba godob tirsanaayey ama ciil gaamuray qabay. Kuwo kale ayaa du fasiray i koronto la’aantu salka ku haysay tashiil xumo harqisay ama haraysay hay’adahi beledka ka jiray oo dhan. Kuwo seddexaad ayaa sheegay i ayyu kala jeclayn i koronto la helo iyo wa wao, Maadaam ay iyagu ka arradnaayeen markii horeba. Kuwa waxa qoraa ama hadalka dadka ka faallooda oo qaadaa-dhiga Ayaa ka yaabay meesha arrad iyo koronto wa’ ay ISKA soo gelikareen, laakin haddana hadalkoodi ku soo gooyay ’Waa qof iyo maankeed.’
Ugu dambaysti waxaa la dhegaystay hadal kooban oo ay soo jeedisay islaan tiri waxaan habaryar u ahay Urunle. Iyada oo illintu ka qubanayso ayay tiri, “Waa naqaan cidda dulmigaan ka dambaysa. Waxaanse wacad ku marayaa in in saa looga haridoonin. Gud kastaa oo ay ku dhuuntaan i mooro kasta oo ay galaan waa looga dabategidoonaa. ”
Marki la weydiiyey cidda ay ku tuhmaysay i ay ka dambeeyeen masiibada dhacday ayay ka dhaaratay i ay magac sheegto.
W / Q. Prof. Cali Jimcaale Axmed